Egwuregwu Klas Sage ọhụrụ dị ugbu a na Black Desert Mobile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Egwuregwu Klas Sage ọhụrụ dị ugbu a na Black Desert Mobile
Pearl Abyss kwuputara taa na klas Sage ọhụrụ na-atọ ụtọ dị ugbu a na Black Desert Mobile. N'izu a, Adventurers nwekwara ike na-atụ anya ọdịnaya egwuregwu ọhụrụ Atumach Skirmish, ebe a na-etinye ndị egwuregwu 25 n'ime otu ise ka ha na-asọ mpi maka ụgwọ ọrụ.
Sage, Onye Ochie Ikpeazụ, bụ klaasị-ụdị nkedo na onye nwe ohere na oge na-ewepụta ike dị ịtụnanya, na-emebi ihe. N'iji Kyve nwere ụdị kube dị ka ngwa ọgụ ya bụ isi, ọ na-emepe ọgbaghara na mbara igwe wee kpọọ Ator's Energy na ọtụtụ anwansi iwe dị egwu.
Ikike ya pụrụ iche ga-eme ka ndị na-eme njem nwee ike ịnwale nkà na ụzụ ma chọta ụzọ pụrụ iche iji nweta aka elu n'ọnọdụ ọgụ dị iche iche. Ngwa agha nke obere, Talisman, na-enyekwara Sage aka ịnakwere ụdị ịgbagharị n'efu wee jiri ọsọ dị egwu gaa na ọnụ ụzọ.
Nka Sage gụnyere
• Rift Chain: Mepee ọnụ ụzọ n'akụkụ ọzọ site n'itinye Kyve nso onye iro, wee weghachi Kyve ka ọ mechie ọnụ ụzọ ahụ wee mebie onye iro ahụ.
• Ikpe nke Ator: Kpọkọta ike nke Ator site n'elu, wee ziga ya na-adakwasị ndị iro.
• Wormhole: Tinye ahụ gị n'ime oghere nwa oge nke Kyve iji mee njem n'enweghị nsogbu n'ebe dị anya.
• Spatial Shatter: Mebie nnukwu mmebi nke ndị iro site na ibibi oghere gbara ha gburugburu.
Iji mee ememe ntọhapụ Sage, ihe omume dị elu na-enye ego na-eme ruo na Nọvemba 29. Ndị na-eme njem na-eme ka Sage ha dị elu ruo ọkwa 70 ga-enweta ụgwọ ọrụ bara uru dị ka 1000 Black Pearls, Tier 7 Pet na Legendary Costume Set Chest.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ndị na-amasị asọmpi co-op play ugbu a nwere ike ịnụ ụtọ ihe omume Atumach Skirmish, ebe agha ebe 25 Adventurers na-etinye n'ime akụkụ 5 nke mmadụ 5. Otu dị iche iche na-emegiderịta onwe ha na egwuregwu na-agwụ ozugbo e meriri Eze Griffon. Na ngwụcha nke Skirmish, ndị sonyere nwere ike nweta Atumach's Seals wee gbanwee ha maka ụgwọ ọrụ.